Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Jolay 2019 à 17:00
287 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Jolay 2019 à 10:20 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Jolay 2019 à 17:00 (hanova) (esory)
Ny [[Bokin'i Henoka|'''Bokin'i''' '''Henoka''']] dia fanangonan-dahatsoratra [[Literatiora apokaliptika|apokaliptika]] isan’ny literatiora tanelanelan’ny Testamenta roa; [[Apokrifan'ny Baiboly|apokrifa]] na [[Pseodepigrafa (Baiboly)|pseodepigrafa]] ho an’ny [[Testamenta Taloha]] izy ka tsy isan’ny kanonan’ny [[Tanakh|Baiboly hebreo]] na [[Baiboly katolika|katolika]] na [[Baiboly ortodoksa|ortodoksa]] na [[Baiboly protestanta|protestanta]]; nampitondrain’ny mpanoratra azy ny anaran’i [[Henoka]] (na Enoka) io boky io. [[Boky deoterokanonika|Deoterokanonika]] ny Bokin’iBokin'i Henoka amin’ny [[Fiangonana ortodoksa teoahedo|Fiangonana Ortodoksa Teoahedo]] ([[Fiangonana ortodoksa etiopiana|Etiopiana]] sy [[Fiangonana ortodoksa eritreana|Eritreana]]).
== Fanoratana ny boky ==
=== Dikan-teny tranainy ===
Nadika tamin’ny [[fiteny grika]] tsikelikely ny Bokin'i Henoka. Natao tanelanelan’ny taonjato faha-4 sy faha-6 avy amin’ny boky amin’ny [[fiteny grika]] ny dika tamin’ny [[fiteny etiopiana]].
Amin’ny fiteny etiopiana ny dikan-teny feno tranainy indrindra ananana an’io boky io. Misy voasoratra amin’ny fiteny grika sy [[fiteny siriaka]] ary [[fiteny kopta]] ny ampahany maro amin’ny boky; misy koa ny andalana amin’ny [[fiteny arameana]] izay angamba nikambana tamin’ny dikan-ten’iotenin’io boky io voalohany, izay heverin’ny maro fa very efa elabe. Hita teo antenantenan’ny taonjato faha-20 tao KomranaKomrano (Jordania) niaraka amin’ny sora-tanana firaketana hita tao amin’ny [[Ranomasina Maty]] ireo sombintsombiny ireo.
== Fizaràn’ny boky ==
=== Ny ''Bokin’ny Fanazavana eny an-Danitra'' ===
Misy fanambaràna tsiambaratelo momba ireo zavatra eny amin’ny lanitra ny ''Bokin’ny Fanazavana eny an-Danitra'' (1Hen. 72 – 82) izay nosoratana tamin’ny fotoana mitovitovy amin’ny nanoratana ny ''Bokin’ny Mpiambina''. Resaka momba ny [[astronomia]] sy ny [[meteorolojia]] no hita ao. Izany no anaovana azy hoe ''Bokin’ny Astronomia''.
=== Ny ''Bokin’ny Nofy'' ===
Fanangonana [[nofy]] maneho fahitana ny ''Bokin’ny Nofy'' (1Hen. 83 – 90) izay voasoratra tamin’ny taona 160 eo ho eo. Mitantara ireo fahitan’i Henoka momba ny safodrano izay hanasaziana izao tontolo izao noho ny haratsiam-panahiny, ary ny hiavian’ny fiandrianana mesianika aorian’izany ity fizaràna ity.
=== Ny ''Epistilin’i Henoka'' ===
“<sup><small>14</small></sup>''Ary Enoka koa, ilay fahafito nandimby an'i Adama, dia efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nanao hoe: "Indro, tonga Jehovah mbamin'ny masiny tsy omby alinalina'' <sup><small>15</small></sup> ''hitsara ny olona rehetra sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asan'ny haratsiam-panahy rehetra, izay nataony tamin'ny haratsiam-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota ratsy fanahy hanohitra Azy''".” (Joda 1.14-15).
“ ''I Henoka ilay fahafito nandimby an’i Adama »''" (1Hen. 60.8)
“Indro“''Indro ny Tompo miaraka amin’ny masina alinalina, hanao fitsaram-panamelohana ny olona rehetra, sy hampiaiky ny ratsy fanahy rehetra ny noho ny asan’ny haratsiam-panahy izay nataony sy noho ny fitenenan-dratsy nanoherana azy izay nataon’ny mpanota ratsy fanahy”fanahy''” (1Hen. 1.9).
=== Lanjan’ny boky amin'ny Kristiana ankehitriny ===
Tsy kanonika ny Boky voalohan’i Henoka ho an’ny [[Jodaisma|Jiosy]] sy ny [[Katolika]] sy ny [[Protestantisma|Protestanta]] ary ny ankamaroan’ny [[Kristianisma ortodoksa|Kristiana ortodoksa]]. Isainy ho [[Apokrifan'ny Baiboly|apokrifa]] na [[BokyPseodepigrafa pseodepigrafa(Baiboly)|pseodepigrafa]] io boky io.
==== Lanjan’ny boky ho an’ny Ortodoksa Teoahedo ====
Ny [[Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany|Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany]] dia tsy mandray ny Boky voalohan’ny Henoka ho isan’ireo boky kanonika mahazatra, na dia heveriny fa ny fizaràna voalohany indrindra dia vokatry ny tsindrimandrin’Andriamanitra[[Tsindrimandry (fivavahana)|tsindrimandri]]<nowiki/>n’Andriamanitra. Ahitana fizaràna izay heveriny fa mirakitra sombin-dahatsoratra avy amin’ny Bokin’i Henoka izay voasoratra voalohany ilay atao hoe ''Bokin’i Mosesy'', izay ao amin’ny kanonan’ny Olomasin’ny Andro Farany. Misy ifanahafany amin’ny Boky voalohan’i Henoka sy ny lahatsoratra hafa atao hoe nosoratan’i Henoka (ny 2 Henoka sy ny 3 Henoka) ary ny ''Bokin’ny Olona goavana'' io fizarànan’ny ''Bokin’i Mosesy'' io. Mahakasika fitantaran-javatra sy lohahevitra ary anaran'olona izany fitovizana izany. Heverin’ny Olomasin’ny Andro Farany ho mirakitra ampahan’ny “zava-miafina sy ny fampianarana ary ny fahitan’i Henoka” ny ampahany natokana ho an’i Henoka ao amin’ny ''Bokin’i Mosesy'', na dia tsy hita ao ny Bokin’i Henoka manontolo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/972525"